Ardor 6.5 tonga miaraka amin'ny fanamboarana ny lesoka fanakianana ao amin'ny Ardor 6.4 sy maro hafa | Ubunlog
Ardor 6.5 dia eto miaraka amin'ny fanamboarana bibikely manakiana ao amin'ny Ardor 6.4 sy maro hafa
vao haingana ny fanombohana ny ny kinova vaovao an'ny tonian-dahatsoratra maimaimpoana Ardor 6.5 izay natao ho an'ny firaketana feo multichannel, fanodinana ary fampifangaroana.
Tamin'ny voalohany ilay kinova tsy maintsy naroso dia ny dikantenin'i Ardor 6.4, saingy nodimbadika ilay izy amin'ny kinova 6.5 ao anatin'ny ora vitsivitsy noho ny olana lehibe voamarina.
Ho an'ireo izay tsy zatra an'i Ardor dia tokony ho fantatrao fa ity fampiharana ity Natao ho an'ny firaketana fantsona maro, fanodinana feo ary fampifangaroana. Misy tabilao multitrack, haavon'ny fanovana tsy misy fetra mandritra ny fiasa miaraka amin'ny fisie (na dia aorinan'ny fanakatonana ny programa aza), fanohanana karazana interface interface.
Ny programa dia napetraka ho analogy maimaimpoana ho an'ny ProTools, Nuendo, Pyramix ary Sequoia fitaovana matihanina. Ny kaody Ardor 6.5 dia zaraina eo ambanin'ny fahazoan-dàlana GPLv2.
1 Fampisehoana vaovao lehibe an'ny Ardor 6.5
2 Ahoana ny fametrahana Ardor amin'ny Ubuntu sy ny derivatives?
Fampisehoana vaovao lehibe an'ny Ardor 6.5
Ity kinova vaovao an'ny Ardor 6.5 ity miaraka amin'ny fanovana lehibe maro, ireo ny vahaolana amin'ny lesoka mitsikera izay niova ny kinova 6.4 rehefa afaka ora vitsivitsy izay manakana ny fivoriana tsy haondrana.
Mikasika ireo fanovana vaovao misongadina dia afaka hitantsika fanatsarana lehibe ao amin'ny kinova vaovao ny fanohanana plugins amin'ny endrika VST3, novolavolain'i Steinberg Media Technologies ary ampiasaina amin'ny rafitra fikarakarana feo matihanina hampifandraisana synthesizer sy lozisialy feo.
Ankoatr'izay ny plugins dia mifanaraka amin'ny Linux, Windows ary macOS.
Ny fampiharana ny Ny VST3 koa dia mandrakotra ny fanitarana Presonus ampiasaina amin'ny plug-in Softube Console1 sy tontonana fanaraha-maso audio.
Ny fanatsarana hafa dia misy ny fanohanana ny JACK1 sy JACK2 amin'ny fivoriambe ho an'ny Windows, nanafaingana be ny fampisehoana ireo lalan'ny MIDI mandeha ho azy.
Ary ireo rakitra WAV sy AIFF dia afaka mampiditra tag metadata izao fivoriana (mampiasa tag id3v2 sy fampahalalana WAV).
Ary farany, raha ny momba ny fanamboarana bibikely:
Ny hetsika MIDI miaraka dia nalamina tsara.
Mipaka ny buffer MIDI rehefa tafiditra ao anaty buffer foana.
Namboarina bibikely tsy fahita firy nefa manan-danja amin'ny kaody ampiasaina amin'ny fitantanana ny firafitry ny angona isan-karazany amin'ny fotoana tena izy.
Namboarina ny fikirakirana ny gadona mozika teo anelanelan'ny 0 sy -1 ny gadona.
Raikitra ny fikirakirana ny seranan-tsambo mpitantana fitaterana rehefa mifamadika fotoana.
Fanaparitahana solo-tena / fandefasana solo-dàlana ivelany.
Raikitra ny toeran'ny kursor sy ny lokon'ny lahatsoratra rehefa manitsy famantaranandro.
Raikitra ny famerenana amin'ny laoniny ny tokana miharihary rehefa mamaky session.
Nanamboatra fanamboarana teo am-baravarankely izay mitsingevana ny editor / plugin GUI rehefa mampiasa varavarankely mifangaro.
Namboarina ny haben'ny varavarankely AudioUnit ho an'ny plugins sasany izay tsy azo ovaina.
Namaha olana isan-karazany rehefa mampiasa MIDI amin'ny ARM (Raspberry Pi).
Fiasa bouncing sy freeze
Ampidiro ny isan'ny fantsona fivoahana rehefa mamoaka ny vokatra
Ny mpilalao horonantsary sy ny fivoahan'ny tambajotra dia tsy mandeha amin'ny laoniny intsony rehefa manotrika lalana
Tsy miraharaha ny metera rehefa manisa fantsona
Ary farany, raha te hahalala bebe kokoa momba an'ity kinova vaovao na momba ilay rindrambaiko ity ianao, dia azonao atao ny manatona ny changelog na mahazo vaovao misimisy ao amin'ny tranonkala ofisialiny.
Ahoana ny fametrahana Ardor amin'ny Ubuntu sy ny derivatives?
Ho an'ireo izay liana afaka mametraka an'i Ardor amin'ny rafitr'izy ireo dia tokony ho fantatr'izy ireo fa ao anatiny ilay fonosana ny trano fitehirizana ny ankamaroan'ny fizarana, vonona hapetraka, fotsiny miaraka amin'ny antsipiriany fa mety tsy ilay kinova farany indrindra io ary ankoatr'izay dia ity ihany kinova fitsapana.
Amin'ny tranga Ubuntu sy derivatives, ny fonosana dia ao anatin'ny trano fitahirizana.
Izany dia nilaza, Raha te-hitsapa ny fampiharana ianao dia avelako anao ny baiko ny fametrahana.
To be able mametraka Ardor amin'ny Debian, Ubuntu ary ny derivatives:
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: ubunlog » Software » Multimedia » Ardor 6.5 dia eto miaraka amin'ny fanamboarana bibikely manakiana ao amin'ny Ardor 6.4 sy maro hafa
Headset, apetraho amin'ny alàlan'ny Snap na Flatpak ity mpilalao mozika ity
MPV 0.33 dia efa navotsotra ary ireto ny vaovaony